တရားမဝင်နေထိုင်နေပြီး …..အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းလုပ် ကိုင်နေတဲ့ …တရုတ်နိုင်ငံသား (၁၈၀)ကျော်ကို…. သေနတ်တွေနဲ့ အတူ …..တာချီလိတ်မှာ ဖမ်းမိ ............ » MPA
တရားမဝင်နေထိုင်နေပြီး …..အွန်လိုင်းလောင်းကစားဂိမ်းလုပ် ကိုင်နေတဲ့ …တရုတ်နိုင်ငံသား (၁၈၀)ကျော်ကို…. သေနတ်တွေနဲ့ အတူ …..တာချီလိတ်မှာ ဖမ်းမိ …………
admin · Posted on May 14, 2019 May 14, 2019
တာချီလိတ်မြို့နယ်ထဲမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ တရားမဝင်နေထိုင်ပြီး အွန်လိုင်း လောင်းကစားပြုလုပ်နေတယ်လို့ သတင်းရတာကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့စုံပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာ
တာချီလိတ်မြို့တွင်း နေရာ (၃)နေရာကနေ တရုတ်နိုင်ငံသား (၁၈၈)ဦးကို ရိုင်ဖယ် သေနတ်(၃)လက်၊ စိတ်ကြွဆေးပြား အချို့နဲ့အတူ မေလ (၁၃)ရက် နေ့လည်ပိုင်းက ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်လို့ ကနဦး သတင်းရရှိပါတယ်။
တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်နဲ့ ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်တို့က နေရာ (၃)နေရာကို ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့စုံပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့က မေလ (၁၃)ရက် မနက် (၁၀)နာရီခွဲကနေ နေ့လည် (၁)နာရီထိုးခန့်အထိ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးရာမှာ အခုလို ဖမ်းဆီးရမိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်ထဲက လပ်ကီးမိုတယ်ကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား (၇၅)ဦး၊ မ (၄)ဦးကို အွန်လိုင်းလောင်းကစားပြုလုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားစုံ (၁၆၄)လုံး၊ လက်ပ်တော့(၅)လုံး၊ စကားပြောစက် (၅)လုံးနဲ့ အတူ ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ရန်အောင်မြေရပ်ကွက်ထဲက နေအိမ်တစ်လုံးကို ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား (၃၈)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ မြန်မာနိုင်ငံသား (၁၀)တို့ကို ဖုန်းအမျိုးအစားစုံ (၁၈၄)လုံး၊ လက်ပ်တော့ (၁၁)လုံးနဲ့ အတူ ဖမ်းဆီးရမိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဝိန်းကျောက်ရပ်ကွက်ထဲက နေအိမ်တစ်အိမ်ကို ထပ်မံစစ်ဆေးရာမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ကျား (၆၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး တို့ကို M-22 ရိုင်ဖယ်သေနတ် (၃)လက်၊
ကျည်ဘောက် (၁၁)ဘောက်၊ ကျည် (၃၂၅)တောင့်၊ ဖုန်းအမျိုးအစားစုံ အလုံး (၂၀၀)ခန့်၊ စကားပြောစက် (၂)လုံး၊ ကျည်ကာအကျီင်္ (၃)ထည်၊ စိတ်ကြွဆေးပြား (၂၅)ပြားနဲ့ အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
အခုလို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တာခြီလိတျမွို့နယျထဲမှာ တရုတျနိုငျငံသားတှေ တရားမဝငျနထေိုငျပွီး အှနျလိုငျး လောငျးကစားပွုလုပျနတေယျလို့ သတငျးရတာကွောငျ့ ဌာနဆိုငျရာ အဖှဲ့စုံပါဝငျတဲ့ အဖှဲ့တှနေဲ့ ဝငျရောကျစဈဆေးရာမှာ
တာခြီလိတျမွို့တှငျး နရော (၃)နရောကနေ တရုတျနိုငျငံသား (၁၈၈)ဦးကို ရိုငျဖယျ သနေတျ(၃)လကျ၊ စိတျကွှဆေးပွား အခြို့နဲ့အတူ မလေ (၁၃)ရကျ နလေ့ညျပိုငျးက ဖမျးဆီးရမိပါတယျလို့ ကနဦး သတငျးရရှိပါတယျ။
တာခြီလိတျမွို့နယျ၊ ဝိနျးကြောကျရပျကှကျနဲ့ ရနျအောငျမွရေပျကှကျတို့က နရော (၃)နရောကို ဌာနဆိုငျရာ အဖှဲ့စုံပါဝငျတဲ့ အဖှဲ့က မလေ (၁၃)ရကျ မနကျ (၁၀)နာရီခှဲကနေ နလေ့ညျ (၁)နာရီထိုးခနျ့အထိ ဝငျရောကျ စဈဆေးရာမှာ အခုလို ဖမျးဆီးရမိတာ ဖွဈပါတယျ။
ဝိနျးကြောကျရပျကှကျထဲက လပျကီးမိုတယျကို ဝငျရောကျစဈဆေးရာမှာ တရုတျနိုငျငံသား ကြား (၇၅)ဦး၊ မ (၄)ဦးကို အှနျလိုငျးလောငျးကစားပွုလုပျရာမှာ အသုံးပွုတဲ့ ဖုနျးအမြိုးအစားစုံ (၁၆၄)လုံး၊ လကျပျတော့(၅)လုံး၊ စကားပွောစကျ (၅)လုံးနဲ့ အတူ ဖမျးဆီးရမိပါတယျ။
ဆကျလကျပွီး ရနျအောငျမွရေပျကှကျထဲက နအေိမျတဈလုံးကို ဝငျရောကျစဈဆေးရာမှာ တရုတျနိုငျငံသား ကြား (၃၈)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ မွနျမာနိုငျငံသား (၁၀)တို့ကို ဖုနျးအမြိုးအစားစုံ (၁၈၄)လုံး၊ လကျပျတော့ (၁၁)လုံးနဲ့ အတူ ဖမျးဆီးရမိပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဝိနျးကြောကျရပျကှကျထဲက နအေိမျတဈအိမျကို ထပျမံစဈဆေးရာမှာ တရုတျနိုငျငံသား ကြား (၆၅)ဦး၊ မ(၅)ဦး တို့ကို M-22 ရိုငျဖယျသနေတျ (၃)လကျ၊
ကညျြဘောကျ (၁၁)ဘောကျ၊ ကညျြ (၃၂၅)တောငျ့၊ ဖုနျးအမြိုးအစားစုံ အလုံး (၂၀၀)ခနျ့၊ စကားပွောစကျ (၂)လုံး၊ ကညျြကာအကြီင်္ (၃)ထညျ၊ စိတျကွှဆေးပွား (၂၅)ပွားနဲ့ အတူဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ။
အခုလို ဖမျးဆီးရမိတဲ့ တရားမဝငျဝငျရောကျနထေိုငျနတေဲ့ တရုတျနိုငျငံသားတှကေို သကျဆိုငျရာ ဥပဒတှေနေဲ့ အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျဖို့ စဈဆေးနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
Celebrity, Knowledge, News